December 2020 - Celegroup
မိတ်ဆွေတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပေမယ့် ရင်ဘတ် မိတ်ဆွေဆိုတာ
December 31, 2020 Celegroup1975 0
“ရင်ဘတ် မိတ်ဆွေ” လူတွေမှာ မိတ်ဆွေတွေ အများကြီးရှိနိုင်ပေမယ့် ရင်ဘတ် မိတ်ဆွေဆိုတာကတော့ အနည်းငယ်သာရှိတတ်ပါတယ်တဲ့ ရင်ဘတ်မိတ်ဆွေဆိုတာ သူ့အကြောင်းကိုယ့်အကြောင်း ယုံကြည်စိတ်ချ စြာ ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ရင်ဖွင့်လို့ရသူ ကွယ်ရာမှာအတင်းမတုတ်သူ ကိုယ့်ပေါ် စေတနာကောင်းထားပြီး ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို လိုလားသူ ကိုယ့်အောင်မြင်မှုအတွက် ဝမ်းမြောက်ပေးပြီး ကိုယ့်ကျရှုံးမှုအတွက် စာနာဖေးမ အားပေးနိုင်သူမျိုးပေါ့… ဘဝမွာ အပေါင်းအသင်းတွေများများရှိဖို့ လိုအပ်ပေမယ့် ရင်ဘတ်မိတ်ဆွေကတော့ တစ်ယောက်လောက်ရှိရင်တော်တော် လုံလောက်နေပါပြီ… ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကိုယ့်ဇာတိရပ်ရွာမှာ ကိုယ့်ကျောင်းနေဖက် ငယ်သူငယ်ချင်းဆိုတာတွေနဲ့ ရင်ဘတ်မိတ်ဆွေဆိုတာ ပေါပေါများများရှိနေနိုင်ပေမယ့် […]
အသက်ကြီးမှ နောင်တမရအောင် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ လုပ်ထားသင့်တဲ့ အရာ(၅)ခု
December 27, 2020 Celegroup1975 0
တစ်ချို့လူတွေဟာ အသက်ကြီးလာမှ ငယ်ရွယ်စဉ်က မလုပ်လိုက်ရတဲ့အရာတွေအတွက် “နောင်တ”တွေ ရတတ်ကြပါတယ်။ အခုဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကို မလုပ်လိုက်ရဘဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျမှ “နောင်တ”တွေ မရအောင် အခုအချိန်ကစပြီးတော့ လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ၁။ ခရီးမသွားတာ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်၊ သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ခရီးတွေထွက်ပြီး နေရာသစ်တွေကို မသွားခဲ့ရတာ နောင်တရပါတယ်။ သူများထက် ပိုလုပ်မှ သူများထက် ပိုရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကြီးရှိနေတာကြောင့် အလုပ်ထဲမှာပဲ နှစ်ထားမိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရင့်ကျင်လာတဲ့အချိန်မှ မသွားခဲ့ရတာကို နောင်တရပါလိမ့်မယ်။ ၂။ လုံလောက်တဲ့ပျော်ရွင်မှု […]
December 24, 2020 Celegroup1975 0
“ၿပဳံးၿပဳံးေလးေနတတ္ရဦးမယ္” တခ်ိဳ႕ဒဏ္ရာေတြရွိတယ္ေတြးၾကည့္ေလးနာက်င္ေလဘဲငါတို႔ဆီမွာလည္းနာက်ည္းေၾကကြဲဖြယ္အတိတ္ေတြရွိမယ္ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္မေရာက္ျခင္ဘူးေလး ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကေသာင္းကနင္းနဲ႔ေရစုန္ေမ်ာ္ခဲ့ဖူးတယ္ယုံၾကည္ရာ ဆြဲကိုင္ရင္းပဲေျခလွမ္းေတြ ယိုင္မသြားေအာင္ထိန္ေလွ်ာက္ခဲ့ရတယ္ တခါတေလငိုျခင္ေအာင္ေမာတယ္စိတ္ဓာတ္ေတြက်လုနီးပါးအထိကံတရားကလည္းမ်က္ႏွာသာမေပးေတာ့ခက္ခဲရာခဲဆစ္နဲ႔ပဲ ပစၥဳပၸန္အခ်ိန္ေတြကိုအေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတယ္ စဥ္းစားရင္း ေဒါသျဖစ္စရာေတြသဟဇာတျဖစ္ၾကဖို႔မရွိတဲ့အမႈအက်င့္ေတြမႏွစ္သက္မွန္းသိရက္နဲ႔ကိုယ္မကင္းေသးတဲ့ လူတခ်ိဳ႕လည္းရွိတယ္ၿပဳံးျပခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီးမုန္းစရာအေၾကာင္းဆို ဥေပကၡာထားလို႔ခဏခဏေရွာင္ခဲ့ရတယ္ ခန္႔မွန္းလို႔မရတဲ့ ဘဝရဲ႕လက္က်န္အခ်ိန္ေတြအတြက္ႀကဳံခဲ့ရတဲ့ျပႆနာေတြဆုံးခဲ့ဖူးတဲ့သူေတြဆီကဘဲ ဥပမာယူရမယ္အၿမဲတမ္းမႏိုင္ေပမယ့္ေလာကဓံကိုရင္ဆိုင္တဲ့အခါအရႈံးဆိုတာကို လက္ခံႏိုင္မွျဖစ္မယ္ေလး ရင့္က်က္ရေတာ့မယ္အေၾကာင္းအက်ိဴးအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ေလာကဇာတ္ခုံေပၚမွာ က်ရာေနရာကက’ ခုန္ၾကရတဲ့အခါေခါင္းငုံ႔မထားရဘူးကိုယ့္ဘဝအတြက္ ကိုယ္ဟာေခါင္းေဆာင္ပဲ ေအာင္ျမင္မႈရယူျခင္သူတိုင္းအခက္အခဲကိုရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊာရတာအေလ့အထ တစ္ခုလို႔မွတ္ပါဘဝဆိုတာပုံေသနည္းတစ္ခုမဟုတ္ေတာ့ျဖစ္လာသမွ်ကိုအေကာင္းဆုံး ရင္ဆိုင္လိုက္႐ုံပဲ လဲက်လိုက္ျပန္ထလိုက္နဲ႔က်င့္သားရသြားတဲ့အခါခြန္းအားတစ္စုံတရာကိုအသုံးခ်ၿပီးငါတို႔ေတြၿပဳံးၿပဳံးေလးေနတတ္ရဦးမယ္ crd,ဘဝရဲ႕ခရီးသည္ unicode ပြုံးပြုံးလေးနေတတ်ရဦးမယ် တချို့ဒဏ်ရာတွေရှိတယ်တွေးကြည့်လေးနာကျင်လေဘဲငါတို့ဆီမှာလည်းနာကျည်းကြေကွဲဖွယ်အတိတ်တွေရှိမယ်ဘယ်တော့မှ ပြန်မရောက်ခြင်ဘူးလေး မျော်လင့်ချက်တွေကသောင်းကနင်းနဲ့ရေစုန်မျော်ခဲ့ဖူးတယ်ယုံကြည်ရာ ဆွဲကိုင်ရင်းပဲခြေလှမ်းတွေ ယိုင်မသွားအောင်ထိန်လျှောက်ခဲ့ရတယ် တခါတလေငိုခြင်အောင်မောတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျလုနီးပါးအထိကံတရားကလည်းမျက်နှာသာမပေးတော့ခက်ခဲရာခဲဆစ်နဲ့ပဲ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ် စဉ်းစားရင်း […]
ချမ်းသာတဲ့လူ နဲ့ ဆင်းရဲတဲ့လူ တွေရဲ့ အတွေးများ
December 23, 2020 Celegroup1975 0
ချမ်းသာတဲ့လူ နဲ့ ဆင်းရဲတဲ့လူ တွေရဲ့ အတွေးများ (၁) လူချမ်းသာက “ငါ့ဘ၀ ငါဖန်တီးမယ်” လို့ ယုံကြည်ထားတယ်။ ဆင်းရဲသားက “ငါ့ဘဝ ငါ့အပေါ် ကျရောက် ချင်သလို ကျရောက်လာတယ်” လို့ ယုံကြည်တယ်။ (၂) လူချမ်းသာတွေက ငွေကြေးကစားပွဲကို အနိုင်ရအောင် ကစားကြတယ်။ ဆင်းရဲသားတွေက ငွေကြေးကစားပွဲကို မရှုံးရရုံသာ ကစားကြတယ်။ (၃) လူချမ်းသာတွေက ချမ်းသာဖို့ကို ဇောက်ချလုပ်တယ်။ ဆင်းရဲသားတွေက ချမ်းသာချင်ရုံမျှပဲ လုပ်တယ်။ […]
နောက် (၂) နှစ်ကြာရင်မင်းဘယ်လိုလူဖြစ်လာမလဲ ..( ယနေ့ ဖတ်ဖို့ )
နောက် (၂) နှစ်ကြာရင်မင်းဘယ်လိုလူဖြစ်လာမလဲ ဒီစာလေးကို စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ စာလေး ကောင်းလို့ လူငယ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ the difference between who you are now and you will be in2years time is dependant on the books you read and the people […]
ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာ လူတစ်ယောက် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အများကြီးအရေးပါတယ်။ (၁)ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့သူက တုံ့ပြန်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့သူက ကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်။အခြေနေတစ်ခုခု ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့သူက တုံ့ပြန်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့သူက ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ အရာတွေကို သူ့အနေနဲ့ ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားပြီးတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တယ်။ ဖြစ်လာတော့မှ တုံ့ပြန်တဲ့သူနဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူနဲ့ ဘယ်သူကသာမလဲဆိုရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူက သာတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစာဖတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်း ကိုယ်က ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ဘက်မှာရှိလား၊ တစ်ခုခုဖြစ်လာတော့မှ တုံ့ပြန်တဲ့ဘက်မှာရှိလား။ ဒါလေးကို ပြန်ပြီးတော့ ဆင်ခြင်ဖို့အတွက် […]
December 22, 2020 Celegroup1975 0
လူတိုင်းက ချမ်းသာချင်ကြပါတယ်။ ကြိုးလည်းကြိုးစားကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတော်တော်များများကို မေးကြည့်လိုက်ရင် ငါတစ်နေ့ချမ်းသာရမယ်လို့ပဲ ဖြေကြတယ်။ တိကျတဲ့ အဖြေတစ်ခုကိုမရဘူး။ တစ်နေ့ကြရင်ဆိုတော့ နောင်(5)နှစ် (10)နှစ်လဲ မသေချာပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကြိုးစားရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားမှာပါပဲ။ ကိုယ်ကတကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင်တော့ တိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ၁။ ကိုယ်က ငွေပမာဏဘယ်လောက်ထိ ပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲ ဆိုတာသိရပါမယ်။ ၂။ အဲ့ဒီငွေပမာဏကို ဘယ်အချိန်မှာပိုင်ဆိုင်ချင်တာလဲဆိုတာ သိရပါတယ်။ ၃။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ငွေပဏနဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာကို စာအုပ်ထဲမှာချရေးရပါမယ်။ ၄။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပမာဏနဲ့ အချိန်ကိုတွက်ပြီး […]
မိဘချွေးနဲ့ခြေဆေးပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ် စတေးနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်
December 20, 2020 Celegroup1975 0
မိဘချွေးနဲ့ ခြေဆေးကာ ဘဝကို မစတေးမိကြစေချင်…ဒီခေတ်လူငယ်အချို့ဟာ မိဘချွေးနဲ့ခြေဆေးပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ် စတေးနေကြသလိုဖြစ်နေတယ် မိဘချွေးနဲ့ ခြေဆေးကာ ဘဝကို မစတေးမိကြစေချင်…… ဒီခေတ်လူငယ်အချို့ဟာ မိဘချွေးနဲ့ခြေဆေးပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ် စတေးနေကြသလိုဖြစ်နေတယ်။ အထူးသဖြင့် အချို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပါပဲ။ မိဘတွေက ကိုယ့်သားသမီးတွေပညာတတ်ပြီး ဘဝမှာလူတန်းစေ့နေနိုင်အောင် နေပူမိုးရွာမရှောင်ရုန်းကန်ရှာဖွေပြီး ကျောင်းထားကြရတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သားသမီးတွေကတော့မိဘတွေကိုမငဲ့ညှာဘဲ အသိမဲ့စွာအပျော်အပါးမှာပဲနစ်မွန်းနေကြတယ်။ ကျောင်းတွေ တက္ကသိုလ်တွေဟာ အချို့ခေတ်လူငယ်တွေအတွက် ပညာရှာရာမဟုတ်ဘဲပျက်စီးရာနေရာလိုဖြစ်နေပါပြီ။ဒကာတစ်ယောက်က လျှောက်တယ်။ ခုခေတ် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ မလွယ်ဘူးဘုရား၊တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်တယ်သာ ပြောတာဘုရား၊အမျိုးမျိုး ပျက်စီးနေကြတာဘုရားတဲ့။ […]
ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဆောင်ချင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့်ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်။ ၁။အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ သင်ယူပါ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစေတဲ့ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေဆိုတာ လူတိုင်းကြုံတွေ့ဖူးသလို လူတိုင်းလည်း ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဟာ သင်အဲ့ဒီအခက်အခဲကို အပြုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှ ပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရသည်ဖြစ်စေ ပြဿနာကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီး ဘာတွေသင်ယူနိုင်မလဲ၊ ဒီပြဿနာကို အခွင့်အရေးအဖြစ် ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုပဲ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ၂။ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ကြိုးစားပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာ […]
December 19, 2020 Celegroup1975 0
“ကိုယ္ႀကိဳက္တာကိုယ္လုပ္ပါ ” တစ္ခါက မုဆိုးလင္မယား ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။မိန္းမ ျဖစ္သူက မုဆိုး အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေယာက္်ားျဖစ္သူကို ဒီအလုပ္လုပ္တာ မႀကိဳက္ရွာဘူး။ ဒါနဲ႔ တစ္ေန႔ ေတာ့ သူ႔ေယာက်ာ္းကို ရွင္ ဥပုသ္ေလး ဘာေလး ေစာင့္ၿပီး တရားေလး ဘာေလးလုပ္ပါဦးလား။ ႐ြာထိပ္က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သြားေပါ့ ဆိုၿပီးလြတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ မုဆိုးႀကီးကလည္း စိတ္လိုလက္ရ သြားရွာတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေရာက္လို႔ ဘုန္းႀကီးကို ကန္ေတာ့ၿပီး တပည့္ေတာ္ကို တရားတစ္ပုဒ္ […]
တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဦးသန့်ရဲ့ စကား (၅)ခွန်း
December 17, 2020 Celegroup1975 0
လူငယ္ေတြအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဦးသန္႔ရဲ႕ စကား (၅)ခြန္း ၁။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိပါ ေလာက၌ ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိေသာ သူသည္ တက္မပါတဲ့ ေလွလို ေရစီးအတိုင္း ေမ်ာခ်င္ရာ ေမ်ာေနတတ္သည္။ ႀကီးပြားလိုေသာ သူတိုင္းသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိရမည္။ သုံးေလာကထြက္ထား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေတာင္ ငါသည္ ဘုရားျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေၾကာင့္သာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာ အျဖစ္ေရာက္ရွိေတာ္မူခဲ့သည္။ မည္သူမဆို ငယ္စဥ္ကတည္းက မွန္းေျခရွိရမည္။ မွန္းေျခရွိေသာ သူသည္ မိမိလုပ္ငန္းတြင္ လြယ္ကူ႐ုံသာမက […]
သင့် ဘဝကို ဦးဏှောက်နဲ့ တည်ဆောက်ပါ
December 16, 2020 Celegroup1975 0
ဘဝကို ဦးေဏွာက္နဲ႔ တည္ေဆာက္ပါ လူေတြရဲ႕ျပဳမူ ေျပာဆိုေနသမွ်တိုင္းကိုလိုက္အာ႐ုံစိုက္ေနမယ္လိုက္ခံစားေနမယ္ဆိုရင္ေလာကႀကီးမွာ ကိုယ့္တြက္ေနစရာ ေနရာေတာင္ရွိမွာမဟုတ္ဘူး…. လူဆိုတာကထင္သလို ျမင္သလိုေျပာမွာပဲအဲဒါကို လိုက္ခံစားမေနပါနဲ႔မလိုမုန္းထား အမုန္းပြားေနတဲ့သူေတြ အတြက္နဲ႔အာ႐ုံအေနာက္မခံပါနဲ႔…. ဥေပကၡာျပဳထားလိုက္ပါ ကိုယ္လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကို ပုံမွန္လုပ္ပါဘယ္သူေတြဘာေျပာေျပာကိုယ့္ဘဝမွာ ကိုယ္သာဘုရင္ ကိုယ္သာပဲ့ကိုင္ရွင္ျဖစ္တယ္…. သင့္ကို အေကာင္းမျမင္ မေကာင္းထင္ေနတဲ့သူေတြကသင့္ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးကိုလိုက္ၿပီးေဝဖန္ကဲ့ရဲ႕ ရႈပ္ခ် အပုတ္ခ်ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး… ကိုယ္လိုခ်င္တာရဖို႔ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ဖို႔ကိုယ့္ဘဝရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုအေရာက္ႀကိဳးစားပါ…. လူေတြရဲ႕ပါစပ္ကသင့္ကို ေဝဖန္ကဲ့ရဲ႕ေနတဲ့ စကားေတြကေနေကာင္းခ်ီးၾသဘာသံ အျဖစ္ေျပာင္းလည္းႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ… နိမ့္က်တဲ့သူကို ႏွိပ္ခ်စြာ ကဲ့ရဲ႕ရႈပ္ခ်ကာျဖင့္သင့္ကို ထိုးေနတဲ့ လက္ညိဳးေတြကိုၾသဘာလက္ခုတ္သံအျဖစ္ ေျပာင္းလည္းႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ…. […]